HATE CRIME? မလေးရှားမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မြန်မာလင်မယား ဓားခုတ်ခံရမှု အဓိကတရားခံ မွတ်ဆလင် အမျိုးသား ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Aung San Suu Kyi » HATE CRIME? မလေးရှားမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မြန်မာလင်မယား ဓားခုတ်ခံရမှု အဓိကတရားခံ မွတ်ဆလင် အမျိုးသား ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ
HATE CRIME? မလေးရှားမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မြန်မာလင်မယား ဓားခုတ်ခံရမှု အဓိကတရားခံ မွတ်ဆလင် အမျိုးသား ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ
သတင်းမှန်ရင် အပြတ်ရှင်းရမယ့်ကိစ္စပါ။ မလေးရှားမှာ လူမိုက်ဌား ပြီး ဝေမာလင်းကိုဓါးနဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကိုဖြတ်ပြီး တစ်ကိုယ်လုံးကို ရစရာ မရှိအောင် လုပ်ခိုင်းတဲ့လင်မယားပါ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေပါ ။ မိန်းမကတော့ရဲဖမ်းထားပါတယ် ယောက်ကျားကတော့ထွက်ပြေးနေပါတယ် မျက်နှာမှာ အမှတ်ရှိပါတယ် တွေ့ရင် နီးစပ်ရာကို Facebook ကနေတစ်ဆင့် သတင်းပေးကူညီပေးပါ။ by snow lay
မလေးရှားမှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မြန်မာလင်မယား ဓားခုတ်ခံရမှု နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး လို့ ဆိုတဲ့ တရားခံမှာ မွတ်ဆလင်မ ဖြစ်ပြီး….မဝေမာလင်းအား သေသည်အထိ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် ကံတရားကြောင့် …မသေဘဲ ဒုက္ခိတ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူများမှ အဓိကတရားခံအမျိူးသမီးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အောက်ဖော်ပြပါ ယာဘက်ပါးအမှတ်ပြာရှိ မွတ်ဆလင် အမျိုးသားမှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ ။ တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ ။ တရားခံ မွတ်ဆလင်အမျိူးသမီးနှင့် သူ့အမျိူးသားမွတ်ဆလင် ဖြစ်ပါသည်။
အမည် – မဝေမာလင်း အသက် – ၂၅ နှစ် ပတ်စပို့ – M 984478 မြန်မာလိပ်စာ – အမှတ် ၉၃၊ သန္တာလမ်း ၊ ၅/၆ ရပ်ကွက် ၊ ရွှေပြည်သာ။ 17.10.2013 တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ အမ်ပန်းဆေးရုံကြီး အနောက်ဘက် ၊ ပန်းဒန်းမယ်ဝတွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖြစ်သည့် မဝေမာလင်း နှင့် အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စကား အခြေ အတင်များကြရာမှ မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ အမျိုးသား ၅ ဦးအား အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် စေခိုင်းခဲ့ပြီး 18.10.2013 နေ့တွင် မဝေမာလင်း နှင့် သူမ၏ အမျိုးသား အလုပ်မှအပြန် စောင့်ဆိုင်းကာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်စေခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ထိုသို့ အခြားအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သူမှ စေခိုင်းမှုကြောင့် မဝေမာလင်းနှင့် သူမ၏အမျိုးသား မောင်အောင်ဇော်ဝင်း တို့မှာ လူ ၅ ယောက်၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံရပြီး ဆိုးဝါးစွာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါသည်။ တိုက်ခံခိုက်ရသူ မဝေမာလင်းမှာ လက်တစ်ဖက် လုံးဝပြတ်ထွက်၊အခြား လက်တစ်ဘက် ၉၀% ပြတ်ထွက် (ပြန်ချုပ်ပြီး) ၊ ဦးခေါင်းတွင် ဓားဖြင့် နှစ်ချက် အခုတ်ခံရ (ချုပ်ချက်များစွာ) ၊ ပါးနှစ်ဘက် ဓားဖြင့်ခုတ်ခံရ (ဒဏ်ရာကြီးမား) မေးရိုးပြုတ်ထွက် (အလူမီနီယံ အစားထိုးရမည်) ဖြစ်ကာ ဆိုးဝါးစွာ ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါသည်။ မောင်အောင်ဇော်ဝင်းမှာမူ ပြန်လည်ခုခံသောကြောင့် တင်ပါးတွင် ဒဏ်ရာရရှိသည်မှလွဲပြီး ကြီးမားသော ဒဏ်ရာ မရရှိခဲ့ပါ။
မဝေမာလင်း နှင့် မောင်အောင်ဇင်ဝင်း ၂ ဦးလုံး ကွာလာလမ်ပူ ၊အမ်ပန်းဆေးရုံတွင် ဆေးကုသ ခံယူလျှက်ရှိပြီး မဝေမာလင်းအတွက် အရေးပေါ်အနေဖြင့် မေးရိုးဆက်ရန် အလှူမီနီယံ အစားထိုးရမည်ဖြစ်ပြီး မလေးငွေ အများအပြား ကုန်ကျခံရမည် ဖြစ်သည်။ လောလောဆယ် မေးရိုး အစားထိုးရန်အတွက် တစ်ဖက်လျှင် ရင်းဂစ် ၂၀၀၀ ကျော် နှစ်ဖက်စာအတွက် ရင်းဂစ် ၄၀၀၀ ကျော်အား မပေးနိုင်ပဲ ရှိနေ ပါသည်။ မဝေမာလင်းအတွက် အလှူငွေ လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။
မဝေမာလင်း၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအား တတ်အားသရွေ့ ပါဝင်ကူညီ လှူဒါန်းနိုင်ရန် မဝေမာလင်းကိုယ်စား အကူအညီ တောင်းခံ အပ်ပါသည်။
နှလုံးလှ ပရဟိတ လူငယ်များ သွေးလှူရှင်အဖွဲ့ (ကွာလာလမ်ပူ) အမှတ် – ၂၃၊ သော်တာနဒီအပေါ်ထပ် (၄ လွှာ) ဂျလန်း လီပို့ပူဒူး၊ ၅၀၀၅၀၊ ကွာလာလမ်ပူ၊ မလေးရှား။ ရုံးဖုန်း – 03 2022 1245 ကိုသက် – 017 2838 470 ကိုအော်စကာ – 016 6738 398 ဆန်းမင်းဦး – 016 3687 939 ကိုသက်နိုင်စိုး – 016 2471 397 ကိုဇော် – 010 5370 833 ကိုပြည်စိုး – 016 6080 357 ကိုမင်းသန်းဟိန်း – 010 260 1552 Email : lovelyheart.blooddonation@gmail.com
သခင် ခက်ထန်See more
မဝေမာလင်းအား သေသည်အထိ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပေမယ့် ကံတရားကြောင့် မသေဘဲ ဒုက္ခိတ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သူများမှ အဓိကတရားခံအမျိူးသမီးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အောက်ဖော်ပြပါ ယာဘက်ပါးအမှတ်ပြာရှိ မွတ်ဆလင် အမျိုးသားမှာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ ။ တွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ ။ တရားခံ မွတ်ဆလင်အမျိူးသမီးနှင့် သူ့အမျိူးသားမွတ်ဆလင် ဖြစ်ပါသည်။
Please also see Burmese comedians views on suffering of Burmese people in abroad (Malaysia).
Tags: 1990 election, 2008 constitution, 2010 election, Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi said "The Results of the 1990 General Elections Must Be Implemented", aung sna suu kyi, BDC, bdcburma.burma election, Burma, burma constitution
By Burma Democratic Concern (BDC) in Aung San Suu Kyi on 26/10/2013 .
← Myanmar Amending 2008 Constitution Declaration	We demand the JUSTICE for victims →